Taliayaha ciidanka XDS oo garoonka Aadan Cadde ku sii sagootiyay Jen. Indhaqarshe – Radio Muqdisho
Taliayaha ciidanka XDS oo garoonka Aadan Cadde ku sii sagootiyay Jen. Indhaqarshe
Taliyaha Cusub ee Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed. S/G Maxamed Aaden Axmed iyo saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku sii sagootiyay Taliyihii hore ee Ciidanka X.D.S Daahir Aaden Cilmi oo u ambabaxay dalka dibeddiisa.
Sidoo kale, waxaa sagootinka ka qeyb galay Wasiirka Caafimaadka Marwo Xaawa Xasan Maxamed. Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Cismaan Daallo. Wasiiru dawlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xaggaa iyo xubno kale oo isagu jira Saraakiil iyo Siyaasiyiin.
Guddoomiye Jawaari oo maanta furay wada hadal ku saabsan arrinta mowshinka
Guddiga Isku dhafka Ciidamadda X.D.S oo booqasho ku tagey Baydhabo “Sawirro”
Guddiga Isku dhafka Ciidamadda X.D.S oo booqasho ku tagey Baydhabo "Sawirro"